အဆိုပါမြွေမှ KANIT အိမ်အမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ခရီးသွားများအတွက်အဲဒီမှာနေဖို့နိုင်သလား? - သတင်း
အဆိုပါမြွေမှ Kanit အိမ်အမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ခရီးသွားများအတွက်အဲဒီမှာနေဖို့နိုင်သလား?
ဘီဘီစီမှမြွေနှင့်ယခု Netflix ကကပြောကြားသည် အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားချားလ်စ် Sobhraj ၏ဖြစ်ရပ်မှန် နှင့်သူ၏ကြံရာ Marie-Andrée Leclerc ။ Sobhraj သည်သူနှင့်အတူဘန်ကောက်ရှိ Kanit House တွင်ကျောထောက်နောက်ခံပြုသူများကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ သူသည်တရားမျှတမှုကိုရှောင်ရှားရန်ထောင်ထဲမှထပ်ခါထပ်ခါလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်သူသည်ပစ်မှတ်ထားသူနှင့်မြွေကြောင့် Bikini Killer ဟုလူသိများလာသည်။
သူသည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Alain Gautier အမည်ဖြင့်သွားပြီးသူတို့သေဆုံးသွားသောနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားသကဲ့သို့သူ့ရဲ့သားကောင်များကိုသူတို့ရဲ့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခိုးယူသည်။ 13 နှစ်အနှံ့ 1976 ။ ၁၉၇၄ မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အတွင်းသူ (၁၂) ဦး ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းမှာအနည်းဆုံး (၃၀) ဖြစ်သည်။
ဒီပြပွဲကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သင်ဟာ Kanit House ဟာတကယ့်နေရာလား၊ toရိယာကိုသွားလာနေတဲ့လူတွေအခုထိရှိနေသေးလားဆိုတာကိုတော့သင်မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြေအားလုံးဒီမှာပါ။
ဒီတော့ Kanit House ဟာဒီနေ့အထိရှိသေးသလား။
Kanit House သည်ဘန်ကောက်တွင်အမှန်တကယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၎င်းကိုဖြိုခွဲခဲ့ပြီးဘီဘီစီကပြောကြားရာတွင်ရိုက်ချက်များသည်ဖြစ်နိုင်သမျှအနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခြားနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလနေရာနှင့်ဆင်တူသည့်တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့သည်။ Kanit House ၏ရေကန်တစ်ဝိုက်တွင်အနားယူနေသည့် Nadine နှင့် Marie-Andréeတို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဓါတ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဖိုးတန်ညွှန်းဆိုချက်များဖြစ်သည်။
ဖိုရမ်တစ်ခုမှာ အဆောက်အအုံသည်ဖြိုဖျက်ခြင်းမခံရမီ Charles Sobhraj ၏အိမ်အဖြစ်ဒဏ္aryာရီဖြစ်လာသည်ဟုတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ထပ်စာရေးဆရာ ကွဲပြားခြားနားသော site ပေါ်တွင် ထပ်မံ၍ ဖြည့်စွက်သည် - ၁၉၉၄ ခုနှစ်ဘန်ကောက်ကိုငါပြန်လာချိန်မှာ Kanit House ဟာရပ်နေတုန်းပဲ။ မကြာခင်မှာပဲသူကဖြိုဖျက်ခဲ့သည်။ Legend ဟုခေါ်သောစမတ်ကွန်ဒိုမီနီယံလုပ်ကွက် (နှင့်သံသယဖြစ်စရာမလိုသောသံသယမရှိ) ယခု၎င်း၏နေရာတွင်ရပ်နေသည်။
ဒဏ္ဍာရီ ရောင်းရန်ကွန်ဒိုများပါ ၀ င်သည့် ၁၄ ထပ်တိုက်ကြီးမားသည့်အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ သင်သည်ဇိမ်ခံကားတစ်လုံး၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး၊ ငှားရမ်းခလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ฿ ၅၈,၀၀၀,၀၀၀ (ပေါင် ၁.၄ သန်း) သည်အမိုးနီးယားရှိပရိဘောဂအပြည့်အ ၀ မရရှိပါ။ တစ် ဦး ကအိပ်ရာပတ်လည်£ 322k တန်ဖိုးရှိသည်။ site ပေါ်တွင်လည်းရရှိနိုင်အားကစားရုံ, ချွေးပေါင်းအိမ်နှင့်ရေကူးကန်ရှိပါတယ်။
မြွေကို UK ရှိ iPlayer နှင့်ယူကေတွင် Netflix တွင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix သတင်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများ၊ အစက်အပြောက်နှင့်မှတ်စုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။